TWS AUKEY EP T25 နားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည် Gadget သတင်း
ဒီနေ့ငါတို့ကြိုးစားရန်ကံကောင်းပြန်သည် AUKEY အမှတ်အသားကြိုးမဲ့နားကြပ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ် EP T25ကျွန်တော်တို့ကိုပြသတဲ့ဒီတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနောက်တစ်မျိုး ကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အကျွမ်းတဝင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်။ စျေးကွက်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးသင်ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြရန်။
သငျသညျအချို့သောကြိုးကြိုးနားကြပ်ဆွဲထားနှင့်အတူလှည့်ပတ်နေဆဲသူကို "ရိုးရာ" သူတို့ထဲကတ ဦး ဖြစ်လျှင်, ဒီမှာသင်ပါလိမ့်မယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခု။ ခံစားနိုင်ပါလိမ့် သင်နှစ်သက်သောဂီတကိုအရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာနှင့် သယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူယခုဖြစ်ပါတယ် မည်သူမဆိုရရှိနိုင်ပါသည်.
1 AUKEY EP T25 သင်ရှာနေသော TWS နားကြပ်များ?
4 AUKEI EP T25 ကဘာကိုကမ်းလှမ်းသလဲ။
5 AUKEY EP T25 နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်ဇယား
AUKEY EP T25 သင်ရှာနေသော TWS နားကြပ်များ?
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အသံနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် မဟုတ်အချည်းနှီး, ဌဂီတနှင့်ပတ်သက်သောသူများသည်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အရောင်းရဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဘလူးတုသ်စပီကာများနှင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များရာနှင့်ချီ။ ရှိလျှင် (ထောင်ပေါင်းများစွာမက) ဒီနေ့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုကြည့်၊ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
AUKEY သယ်ဆောင်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ စမတ်ဖုန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖန်တီးရန်သူ့ဟာသူရည်စူး။ သူတို့ထဲကအတော်များများလည်းအသံနှင့်ဂီတနှင့်ဆက်စပ်သော။ ကျနော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီရဲ့မော်ဒယ်များစွာကိုစမ်းသပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ပြီးပြီ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့နိမ့်ဆုံးအရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဟုပြောနိုင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းနှင့်လည်းမျှတသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်း။
AUKEY's T25 EP တွင်aချောမောပုံသဏ္.ာန် စျေးကွက်ရှိအကျော်ကြားဆုံးနားကြပ်သို့ \_ t Apple AirPods Pro။ အခြားအရောင်, နှင့်လျော့နည်းဟန်ဆောင်မျှော်မှန်းချက်နှင့်အတူပေမယ့်, သူတို့လည်းရောက်ရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းမ အများကြီးစျေးသက်သာစျေးနှုန်းနှင့်အတူ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းတို့သည်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ဆဲဖြစ်ပြီးအခြားမည်သည့်အရာများနှင့်မဆိုစစ်မှန်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်အတွင်းပိုင်း၌ရှာတွေ့နိုင်သောအရာအားလုံးကိုပြောပြရန်သင်သေတ္တာအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရမည်။ အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်း နားကြပ်ကနေအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မမျှော်လင့်နိုင်ဘူး။ အရာရာတိုင်းရှိတယ်၊ ငါတို့ဘာမှမလွတ်သွားဘူးလို့ငါတို့ပြောနိုင်တယ် ငါတို့မှာရှိတယ်၊ နားကြပ်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအားသွင်းစက်များ.
အဆိုပါယုတ္တိဒြပ်စင်အပြင်ကျနော်တို့ AUKEY ၎င်း၏မော်ဒယ်များတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်သည်ဘယ်လိုကြည့်ပါ နားအပိုအပိုနှစ်စုံ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားသုံးစုံရှိသည်။ က နားထောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ။ နားကြပ်များမှန်ကန်စွာဖြင့်နားကြပ်သည်အသံအရည်အသွေးနှင့်ဆူညံသံလျော့နည်းစေသည်။
အဆိုပါမှတပါးပိုပြီးထည့်သွင်းဖို့ Little က "အမှုအားသွင်း" ကိုအားသွင်းဖို့ cable ကို, သောရှိပါတယ် USB Type-C အမျိုးအစား။ ဝန်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်စေမည့်အရာ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပုံမှန်အာမခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အမြန်လမ်းညွှန်တိုတိုရှိပါသည်။
ကျနော်တို့အချို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အလွန်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနားကြပ်။ ၎င်းတို့တွင်“ ခလုတ်” ပုံစံရှိသည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်နားမှနှိမ့်ထွက်နေသောရှည်လျားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြောရရင်သူတို့ဟာသူတို့က AirPods Pro နဲ့အလွန်ဆင်တူတယ်၊ နားကြပ်ရဲ့အပြင်ဘက်ပုံစံက ပိုပြီး angular နှင့်လျော့နည်း rounded ပုံစံမျိုးစုံ.
ဒီနားကြပ်အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ အသံခေါ်ဆိုမှုသည်နားကြပ်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် အဲဒီနားထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းတစ်ခုအနေနှင့်ရှည်လျားသောအစိတ်အပိုင်း၏အဆုံးတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုထည့်သွင်းထားသည်။ အသံကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အရာ၊ အထူးသဖြင့်အခြားအဆုံးကနေငါတို့နဲ့စကားပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်။
နားကြပ်၏အတွင်းဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် Inar Ear ဟုခေါ်သည်။။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းတွင်လူသိများသော“ ရာဘာကြိုးများ” ရှိပြီးအထပ်တွင်ရှိသောတဲအတွင်း၌ရှိနေသည်။ ပို၍ ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့လာပြီးနောက်လိုက်များနှင့်ဝေဖန်သူများနှစ် ဦး စလုံးရှိသည်သောပုံစံတစ်ခု။ ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုထားပြီးမှန်ကန်သော pads များဖြင့်အသံအတွေ့အကြုံသည်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟုထင်ရသည်။ ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကွဲပြားခြားနားတဲ့အရွယ်အစားသုံးမျိုးအထိတွေ့နိုင်တယ်။
La "တာဝန်ခံအမှု" ကျနော်တို့က၎င်း၏အဘို့အထူးသဖြင့်ကြိုက်တယ် သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား။ တကယ်လား အိတ်ဆောင်ထဲမှာသယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေဒါမှမဟုတ်။ နားကြပ်၏အတွင်းပိုင်းနားတွင်နားကပ်အနားယူထားသည့်နားကြပ်အနေအထားကြောင့်၎င်းအရွယ်အစားသည် ပို၍ ချောမွေ့သည်။ သူတို့မှာတစ်ခုရှိတယ် သေးငယ်တဲ့ LED မီးသည်အလွန်အမြင်အာရုံလမ်းအတွက်အားသွင်းအဆင့်ကိုညွှန်ပြ.
Su သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်အနိမ့်အလေးချိန် တစ် ဦး နှင့်အတူပေါင်းစပ်အစုံ၏ 25 နာရီစုစုပေါင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သူတို့ကိုစံပြအဖော်များပါစေ။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် USB Type-format အမျိုးအစားအားသွင်းသည့် port၊ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းများရှိသည့်ကြိုးများနှင့်ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမှုအတွင်း၌ရှိနေစဉ်၎င်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောကိုင်တွယ်နိုင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သံလိုက်ညှိနှိုင်းမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်နည်းပါးသည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ပညာရှိရွေးချယ်ပါ။
AUKEI EP T25 ကဘာကိုကမ်းလှမ်းသလဲ။
AUKEI နားကြပ်များသည်လူ ဦး ရေထူထပ်သောစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သောအတုနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်သည့်ထုတ်ကုန်များထဲတွင်ထင်ရှားသောထုတ်လုပ်သူအချို့ရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာဖွေရန်မလွယ်ကူပါ.
အဆိုပါ T25 EPs တစ် ဦး ရှိသည် 25 နာရီစုစုပေါင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ အခြားသူများကမ်းလှမ်းသည့်အရာထက်သာလွန်သောအရာနှင့်၎င်းသေးငယ်သောနားကြပ်နှင့်အိတ်များတွင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ The ထိတွေ့နည်းပညာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များမလိုအပ်ပါက၎င်းတို့စျေးနှုန်းများကိုစဉ်းစားသောအခါ၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်ထိုက်တန်သည်။
ငါတို့သုံးနိုင်တယ် အဆုံးမဲ့တထိထိထိန်းချုပ်မှုများ, keystrokes နှစ်ခု, keystrokes သို့မဟုတ်တစ် ဦး ရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်း။ တေးဂီတဖွင့်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတိုးတက်ခြင်း၊ နောက်ပြန်သွားခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနှင့်ထိစရာမလိုပဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့မှာရှိတယ် ဘလူးတုသ် 5.0 ဆက်သွယ်မှု, အမှုန်နှင့်အချက်ပြအတွက်ပြတ်တောက်၏မရှိခြင်းအတွက်အစာရှောင်ခြင်းဆက်သွယ်မှုကိုအာမခံပါသည်။ ငါတို့တွေ့တယ် အသံအရည်အသွေးကောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနက်ရှိုင်းဆုံးဘေ့စကိုကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမြင့်မားစွာခံစားနိုင်သည်။ The အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်လုံလောက်သည်, ငါတို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်သောအခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်။ ငါတို့ရတယ် ခေါ်ဆိုမှုများအတွင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရလဒ် တယ်လီဖုန်း။
AUKEY EP T25 နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်ဇယား
ပုံစံ EP T25
အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်မှု တစ် ဦး တည်းအဆင့်ဆက်သွယ်မှု
Virtual လက်ထောက်လိုက်ဖက်တဲ့ SI
နားကြပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တစ်ခုတည်းအားသွင်းအပေါ်5နာရီအထိ
စုစုပေါင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 25 horas
အလေးချိန် 35.1 ဂရမ်
ရှုထောင့် X ကိုက x 10.8 9.24စင်တီမီတာ
အထူးစျေးနှုန်း 25.99 €
သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် အသံအရည်အသွေး muy buena ။
La အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းစပ်လျဉ်း ကောင်းတယ်
ပုံစံ "နားထဲမှာ" နေဆဲအချို့အသုံးပြုသူများအဘို့အအနုတ်လက္ခဏာ။
ဗားရှင်းတစ်ခုပဲရှိတယ် အရောင် အနက်ရောင်
Opciones de အရောင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » AUKEY EP T25 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း